Fanovana Abidia Fanodikodinan-tsaina Ao Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Ελληνικά, Español, русский, bahasa Indonesia, English
Soratra Latina tao Kazakhstan, nampiasaina tamin'ny governemanta Sovietika talohan'ny niovana ho amin'ny endri-tsoratra sirilika (Abidia Slavy). Nomena ny endri-tsoratra ihany koa ny teny taloha. Sary tamin'ny taona 1924 azon'ny rehetra ampiasaina.
Satria miady amin'ny fahafatesany manokana sy ny fihisatry ny toekarena efa nambara ny filoha jadona Nursultan Nazarbayev, 76 taona ao Kazakhstan, vao mainka izy miha-mankafy manao fanambarana lehibe sy mamoaka didim-panjakana.
Hita miharihary vao haingana tamin'ny 12 Aprily izany, raha nandidy ireo manampahefana mba hanomboka hikarakara ny fialàna amin'ny abidia sirilika hiditra amin'ny soratra Latina izy. Hanomboka amin'ny faran'ny taona ny fiovana ary hifarana amin'ny taona 2025.
Anisan'ny paikadin'i Nazarbayev hametraka an'i Kazakhstan ho iray amin'ireo firenena 30 mandroso indrindra manerantany ny fanapahan-kevitra. Tamin'ny lahatsoratra navoakany tamin'ny gazetim-panjakana Kazakh “Егемен Қазақстан” (Kazakhstan Mahaleotena), nanoratra izy fa manana “lalan-tsaina lalina” ny fidirana amin'ny abidia Latina ary hanampy hiatrehana ny “teknolojia sy ny fifandraisana ankehitriny ary koa ny fandrosoana ara-tsiantifika sy ara-pampianaran'ny taonjato faha-21″.
Midera ny fiovana ho fomba hampandrosoana ny teny Tiorka ao Kazakhstan ny sasany, teny izay matetika takon'ny teny Rosiana eo amin'ny fiainam-bahoaka. Mihevitra kosa ohatra ilay mpisera Facebook, Tolegen Baitukenov, fa ny fampiasana ny Latina dia sahaza kokoa ho an'ny teny Kazakh ary hanampy ireo tsy mpampiasa ny teny hianatra izany mora kokoa:
Tsara raha miditra amin'ny abidia Latina isika satria samihafa tanteraka amin'ny teny Rosiana ny teny Kazakh. Hanampy ireo tsy mpampiasa ny teny Kazakh hianatra haingana kokoa ny teny Kazakh izany ary hahafantatra fa teny vahiny izany satria samihafa tanteraka amin'ny Rosiana Sirilika.
Ny hafa kosa mahita izany ho fivaonana amin'ilay antsoin'ny filoha Rosiana Vladimir Potinina am-pieboana fa “Tontolo Rosiana” (Русский мир) ahitana ireo firenena tahaka an'i Kazakhstan, tsy izany kosa ny zavatra nisisihan’i Nazarbayev, mpiara-dia an'i Potinina.
Saingy maro kosa ireo mahita fa fandaniana tafahoatra ny tetibola efa voafetra fotsiny ireo zavatra roa ireo
Namintina ity fomba fijery ity tamin'ny lahatsoratra nahazo tiako 500 ilay mpandraharahan'ny banky any an-tsesintany, sady mpifanandrina amin'i Nazarbayev taloha:
Mahita aho fa maro ireo miahiahy kokoa amin'ity vaovao fidirana amin'ny soratra Latina ity fa tsy amin'ny kolikoly eo amin'ireo manampahefana ambony, ny fari-piainana ambany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny polisy sy ny fitsarana ao Kazakhstan. Marobe ireo olana ao amin'ny firenena izay tokony hovahana avy hatrany. Miliara amin'ny dolara no holaniana amin'ny fandrafetana indray ny rafi-pampianarana. Afaka hamaha ny olana eo amin'ny rafi-pampianarana ve ny fanovana ny abidia? […] Efa tafiditra ao anatin'ny solosaina ankehitriny ny teny rehetra manerantany – na dia ny sora-tsary (hyeroglyphe) aza. Tsy handeha hanova ny abidian'izy ireo mba hampifanaraka tsara kokoa amin'ny fanamby ankehitriny ny Shinoa, Japoney sy ny Koreana.
Jereo, izao, ny lafiny hafa!
Nanamarika tamin'ny lahatsorany ihany koa i Ablyazov, izay tsy nanafina ny fikasany hanongana ny governemanta sy niakatra fitsarana tsy natrehany ho nanao hosoka goavana tao Kazakhstan fa matetika manao fanambarana tahaka izany ny governemanta mba «tsy hitodihana amin'ny olana maro misy ankehitriny” ao amin'ny firenena.
Mahafantatra izany paikady izany ihany koa ireo mpisera media sosialy Kazakh. Vao haingana tamin'ny volana Marsa, tsy vao sambany ny depiote iray ao amin'ny parlementa no nilaza momba ny fanomezana anarana indray ny renivohtira Astana sy ireo “zava-dehibe hafa amin'i Nazarbayev ao amin'ny firenena”, tamin'ny fotoana niomanan'ny governemanta indrindra hanodina vola 3,4 miliara dolara tokony hamahana ny olana eo amin'ny sehatry ny banky ao amin'ny firenena. Nanjary lasa adihevitra ny fanehoan-kevitr'ity depiote ity, raha raraka ny vaovao momba ny drafi-panavotana.
Ao anatin'izany, nanoratra ilay mpisera Facebook Zhanna Bota fa mety hafainganina mba hanodinana ny saina amin'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana malaza ratsy ny fanovana abidia efa nomanina ela. Na ny marina kokoa, nanamarika i Bota fa nanomboka niady hevitra indray momba ny volavolan-dalàna mampiadihevitra momba ny fanana-tany, izay efa naato taorian'ny fihetsiketsehana goavana manohitra ny governemanta tsy misy toy izany ireo mpanao lalàna.
Any ho any ao Azia Afovoany, firenena roa mpanao didy jadona indrindra ao amin'ny faritra: Ozbekistan sy Turkmenistan, no niala tamin'ny sirilika niditra tamin'ny Latina, izay hita fa vitsy ny tombontsoa tamin'izany..
Nanao antso tao amin'ny bilaogy ho an'i Kazakhstan i Daniil Kislov, mpanao gazety teratany Ozbekistan, izay mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny tranonkala malaza, Fergana News miresaka momba an'i Azia Afovoany, mba “tsy hamerina ny fahadisoana” efa nataon'ny governemanta ao amin'ny tanindrazany :
Ho lava, lafo sy maharary ilay lazaina fa fotoanan'ny fiovana, satria handany betsaka amin'ny resaka hery ara-bola, ara-pihetsehampo sy ara-tsaina eo amin'ny fiarahamonina, ary mety ho tsy mahomby tanteraka ny fiantraika ara-tantara sy ara-kolontsaina amin'ny soratra Latina.
Azo antoka fa tsy hisy hihaino izany teny izany, na izany aza, tahaka izany ny lalana izay napetraky ny lehilahy lazaina fa «Lehiben'ny Firenena» ho lova tamin'ny taona 2010.
Tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana ny firenena izay efa nankatoavin'ny lalàmpanorenana, sy tamin'ireo zaridaina, sekoly, oniversite sy sarimihetsika natokana nanomezam-boninahitra azy, efa voasoratra tsara eo amin'ny tantaran'i Kazakhtan ny anarana «Назарбаев». Ankehitriny, vonona hijery ny fanoratana «Nazarbayev» ho solon'izany ny lehilahy matanjaka.